Olee otú ị ga - esi ghọọ ọkà mmụta sayensị sayensị bụ ọkachamara? - Ụlọ akwụkwọ nkà na ITS
Olee otú ị ga - esi ghọọ ọkà mmụta sayensị sayensị bụ ọkachamara?
Kedu esi esi ghọọ Data Scientist?
Ọkà Mmụta Ọmụmụ Ihe Ọmụma Ihe Ọmụma data
Ọkachamara sayensị data - Data Scientist
Ọzụzụ Ule Ọgwụ
Ọkà mmụta sayensị data : Data Science bụ ubi interdisciplinary na-eji ọtụtụ ọkachamara ọkachamara - nha, mmemme, ngwa igwe, data Ngwuputa, na nyocha - itinye uche n'ihe mmụta na ihe enyemaka nke ihe ọmụma nwere ike iji mee ihe ndị ị ga-ahọrọ. Site na mgbawa nke data n'ozuzu ebe a, sayensi sayensị enwetawo ọnọdụ nke ịbụ ihe nrịba ama n'etiti ọrụ kachasị elu ma na-akwụ ụgwọ maka ihe ndị na-abịa. Ịtụgharị n'ime onye nchọpụta data adịghị arụ ọrụ dị mfe n'ihi na ọ na-eme ka ndị ọkachamara bụrụ ndị dị ukwuu n'ọtụtụ ógbè nke ịmara gụnyere agụmakwụkwọ, nkà na ụzụ ngwanrọ, mmụta eziokwu, nyocha igwe, nnyocha nyocha, nchekwa data, arụmọrụ na-enyocha. Iji nweta ụdị dịgasị iche dị iche iche, ọ bụ ihe dị mkpa iji nweta nkwadebe nke ọma site na ntọala mmụta nke a na-akọ na nke nwere ụkpụrụ dị mkpa ma na-amụta ihe iji kụziere isiokwu ndị a.
Usoro 12-izu ma ọ bụ 3 ọnwa site na Nchọpụta Nchọpụta Ọhụrụ na Data Science bụ ma eleghị anya ụgwọ kacha mma maka ndị chọrọ ịbanye na nnukwu data nchịkọta. Ụlọ ọrụ a mepere emepe na-agụnye nke 12 dị iche iche modul ebe a ga-emesi ike na nke ọ bụla n'ime ike ndị ahụ kwuru n'okpuru:
Linux na SQL
Arithmetic na Statistics
Egwuregwu Python na Scala
Hadoop YARN na Ambari
Sqoop, Flume na Kafka
Pig, Hive na Impala
R mmemme ma ọ bụ Nlereanya Echebe
Igwe ihe igwe
Nyocha na Ndenye Ndenye
Malite Ngwaahịa Ịmụ
Kwa otu n'ime isiokwu ndị a na-akọwa Big Data Nchịkọta nke bụ ogige na-adịghị agwụ agwụ na-eme dị ka okwu a na-ewu ewu ụbọchị ndị a. Usoro a malitere ịmalite n'enweghị enyemaka dị n'èzí iji gosipụta echiche dị mkpa gbasara ọganihu data Big data, ka ị na-aga n'ihu n'ịmụ ihe Science Science. A na-etinye usoro nchịkwa nke Hadoop n'ụzọ dị ịtụnanya iji mee ka ndị òtù na-asọmpi akụkụ nke Apache Hadoop maka nnukwu data nchịkọta.
Nke a bụ maka wannabs ndị dị ugbu a na nchọpụta azụmahịa, ma chọọ nduzi na nkwado na echiche, dịka ọmụmaatụ, R mmemme, Ịmụta Ngwaọrụ, Ụdị Nlereanya, na Ndekọ Ọnụ. Ndị ọkachamara ahụmahụ dị mkpa ka ha lelee ikike ha iji kwadebe nkwenye nwere ike isonye na usoro ọmụmụ 3 izu. Ndị nchọpụta na-achọsi ike na data na usoro a ga-ebutekwa ikike na usoro data ntanetị na nyocha. Usoro a ga-ebuba usoro modiri ndị a:
Sayensị na Ndekọ
R Mmemme na Nlereanya Ebube
Nchịkwa Science Science na India | Gịnị kpatara sayensị data?
18 Nyocha Ajụjụ Ajụjụ & Azịza kachasị mma